Agaasimaha qorshaynta w. arimaha gudaha P/Land oo ka warbixiyay safaro dibada ah – SBC
Agaasimaha qorshaynta w. arimaha gudaha P/Land oo ka warbixiyay safaro dibada ah
Maxe’d Cali Nuur (Juba) oo ah agaasimaha qorshaynta wasaarada arimaha gudaha Puntland ayaa SBC Nairobi uga waramay safaro uu ku tagay dalka dibadiisa gaar a haan dalka Spain halkaas oo uu kaga qayb galay tababar u socday mudo labo todobaad ah .
Agaasimaha ayaa sheegay in uu u tagay Barcelona tababar ku aadan dhanka maamul baahinta isagoo sheegay in somaliya uu ka socday isaga oo kali ah.
Agaasimaha ayaa ka dhawaajiyay in tababarkan uu si wayn u khuseeyay maamul baahinta iyo horumarinta dawladaha hoose iyadoo goobta lagu soo bandhigay casharo la xiriira dhamaan arimahan oo dhan iyadoo ay ka soo qayb galayaashii si wayn uga faa’idaysteen mudadii ay socdeen casharadu .
Agaasime Juba ayaa mar kale ka dhawaajiyay in mudadii uu tababarkan uga socday Barccelona ay sidoo kale soo qaateen casharo la xiriira xalinta khilaafaadka iyo siyaabaha ugu haboon ee lagu xaliyo khilaafka , iyadoo wadamadii ka soo qayb galay tabarkan ay ka mid ahaayeen Yugoslavia,Sieraleone, Cosovo iyo wadamo kale oo caalamka ah .
Tababarkan oo Barcelona ka socday mudo laba todobaad ah ayaa ku soo dhamaaday qaab aad u wanaagsan isagoo agaasimuhu uu sheegay in waxa uu ka soo faa’iday tababarkan uu uga faa’idayn doono bulshada Puntland marka uu ku laabto dalka .
Ma’ahan markii u horeysay ee agaasimah qorshaynta wasaarada arimaha gudaha puntland uu ka soo qayb galo shirar lagu qabanayo dalka dibadiisa iyadoo kulamadii ugu dambeeyay ee uu uga soo qayb galay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Uganda uu ahaa shirk u saabsanaa barnaamija Joint Program.
Xasan Cabdi Farey (Xasan Gentleman)